Kulan Muuqaal: Murugada im Dialog… | Portal │ Hans Kottke
« mashruuca ardayga: kanaalka dhegta dhex qarniyadii hore ee Martineum iyo Katharineum…
Asadian loo habeeyey: Looma noqonayo – Xaraaradda An Armenian… »
Kulan Muuqaal: Murugada im Dialog…
Halkan waa version waayeel ah:
Marxaladda madhan tahay. Hans yimaado oo fadhiya hoos on a
Guddoomiye. Waxa uu u muuqdaa mid aad u niyad-jabsan.
Ka dib qeybtii daqiiqadii ah Hanna adigoo yimaado marxaladda
oo ka fiirsaday Hans.
Hey! Kulan wanaagsan. Like
Ma waxaad tahay oo dhan?
Waa maxay su'aashan? Ha aad ka filan
run ahaantii jawaab, ama waa in
Waxa kaliya ee aan idin warsanayn, Sidee tahay
On, mid ka mid yaabab kaliya, haddii aad
Laakiin waxa aad ka filan, Waxaan
xikmadda, Waan fiicanahay!
Markaasay, horeba. Taasi waxay ku
Smalltalk caadiga ah.
Anigu ma aan ka jawaabo,.
Wixii qeybtii daqiiqo oo aamusnaan ah dhacdaa dhacdaa. Sets Hanna
kursi labaad oo loo arkaa Hans.
Ma wax khaas socday kula?
I silcin fikirradayda. Waxaad
cilada sida WAYDAARKA ah. Waxaan
wac gobolka taasi mar walba
Miyuu this wareegyada fikrad
Ma aqaan. Waxa kaliya dhacdaa
oo iga lumo
Is-kalsooni iyo I tijaabi
dejiyo, Laakiin waxa aanan samayn
Waxaan sameyn karaa wax kasta oo aad u?
Naftayda aqbal, sidaan
bin. Kaliya niyadjab aan ahay.
Oo weliba waxaan isku dayi inaad tan aqbashaan.
Niyadjab? Waxaan u leeyihiin
Eebaa iska leh, laakiin ma awoodo igu
soo bandhigo, sida tan
State ee maskaxda.
Waxaad tahay on si ay ula dagaalamaan adiga iyo
lumin this wax badan xoogga kuu ah.
Oo anigu waxaan ahay uurkiisa ku sii jeeda
oo ay xiriir la
Oo dunida ka baxsan sida aan
dhibaato. caadiga ah
Adkeynayaa igu adag
dharka cabsi iyo waxaan
wax dib. Xitaa hurdo waa
ugu wanaagsan run ahaantii ma ah.
Markaasay, Waxaad eegi daal.
Isbeddelo ah niyadda oo ka mid yihiin
my dhismeedka shakhsiyadda. Waxaan
loo yaqaan iyada muddo dheer iyo waa
had iyo jeer saldhig cusub
Maxaad samaynaysaan oo aad dhinaca kale?
Waxaa jira saddex waxyaalood oo muhiim ah:
1.daawo, 2. daweyn
tallaabooyin iyo 3. my
Sanqadhaha arrin wanaagsan…
Laakiin tani waa wax laakiin
kaliya. Daawada la
xujo dhab ah. kasta
Qofka oogaatid, kuwaas oo kala duwan
Daroogooyinka iyo waxay u baahan yihiin si ay u yareeyaan
la isku dayay u qaadidda. Markaasuu
iyadoo waxyeelo aad u leeyihiin in ay
marka hore qabsadaan. a
Psychotherapy waa ku caawini karaa,
laakiin marka hore ka heli a
Daaweyahana. Mararka qaarkood aad awooddo
sugayaan sanad barkiis. Waxa uu ahaa
waa mid aad u muhiim ah, Waxaan looma oggola
ilaa siin iyo isku day aan
Si aad u hesho isku dayga shakhsiyadeed. Taasi
ie, Waxaan isku dayaa in ka
Oo dunida ka baxsan dhex xiriirada bulshada
soo bandhigo inkastoo dhibaatooyinka.
Taasi ma noqon karo fudud…
Waan ogahay, shaqsi ahaan aan awoodo
kaliya aniga beddelkeeda kale
Dadka caddeyso. Kaliya halkaan
Waxaan aad u hesho ra'yi-celin wanaagsan
iyo aqoonsiga, Waxaan si
deg-deg ah u baahan. Noqosho iyo
Baxso Teste gaadiidka.
Waayo, kan halkan ayaan ahay. waxaan isku dayi
si aad wax u kastaan.
Waad ku mahadsan tahay. Laakiin aan waayo-aragnimo uu leeyahay
i baray, in inta badan
Dadka qaba niyad-jabka
kulmi total muraaradillaacsan.
Waxaad si fudud u dareen awoodo aan
mana ku koobayaan. Depression
waa cudur iyo in a
halis ah. 15 % adag ee
ismiidaamin guul. In saxaafadda
inta badan soo noqnoqon wararka
Dilaya dadka caanka ah – sida
Tusaale ahaan, goolhaye Robert ah
carmal – on, laakiin wakhti yar oo gaaban ka dib
ay yihiin dadweynaha
waxaan xusuustaa. Laakiin aad awoodid
ma daweeyo cudurka this?
Haddii aad ayaa dhaawac soo gaaray lafta
waxaad, waxaad u tegi qaliin galay.
Waxaa ay qotomiyey aad jab iyo
aad dib ugu caafimaad.
taas oo niyad-jabka waa mid ka mid,
waxaad u timid in maskaxda iyo
loola dhaqmi doonaa si waafaqsan. laakiin
daruuri caafimaad ah oo aad samaysaan
aan guriga tago. maskaxda
Cudurada badanaa waxay leeyihiin a
Dabcan chronic. Oo iyaga ha
sida caadiga ah ma si cad u jeclaan ah
kala saar jabka. Sidaas waa a
inta badan Depression la cabsi
ku xiran iyo sidaa darteed waxaa jira dad badan oo
-guur u dhaxaysa
kala duwan ee maskaxda
waxaan fahamsanahay, in ay jirto a
Farqiga u dhaxeeya jirka
iyo cudurrada dhimirka.
Laakiin sidee ayaan idin ka mid ah aad
Waan kugu mahad naqayaa, waayo, dadaalkaaga.
Waxaa laga yaabaa in aan sidoo kale awoodo qaar ka mid ah
wada samayn. Laakiinse waxaan u
go'aansato, taas oo aan
State of maanka ku dhaco ama ma.
Maxaa u muuqataa fudud, aan awoodo
weli qarqin. Waxaan u baahan tahay inaad
dhaqmaan tallaabooyin yaryar.
Ma waxaad wali kuwa kale
xiriirada bulshada, upka
keeni kartaa fikrado kale?
Nolol maalmeedka iyo tagaa oo
waa adag tahay inay ka adkaadaan. Laakiin waxaan
waxay leeyihiin xiriir la leedahay
Kooxda Taageerada, cabsi
iyo niyad-jab ay naftooda ka cabanaya
ay isu yimaadaan. Waxaan Waxaa hadlo
Faa'iidada waa, Waxaan ka
Equal dhakhso badan u saameeyeen
aqbalo dhibaatooyinka iyo
ayaa la fahamsan yahay. The
Kooxda Self-help si fudud waa igu
Kraft. Kaliya waxaan kasta oo karaankeena ah
Waxaa lagu talinayaa in depressives.
Ok, Waxaan arki, in aad dadaalaan ku yaalla
ka niyadda madow
ka soo baxay. Oo anigu waxaan arki doonaa
isku day, xaaladaha aad
aqbali. Just ii sheeg, sababta
aad tahay dhexgalka oo ila jooga
Xaq All – Waxaan sameyn doonaa in.
Hadda waxa uu ii ahaa mid u wanaagsanyahay
soo gabagabeeyay, in aad i maqashaan.
My Dooni lahaa, in dhammaan
Dadka badan oo nafsi ah
Cudurada ogaan lahaa. Markaasuu
ay tahay in ay mar dambe ma ay
Cabsi iyo wadanoolaashaha
sahlanaan lahaa. Xitaa
bulshada lafteeda ayaa u baahan qaar ka mid ah
sameeyo mustaqbalka, oo sidaas daraaddeed
xanuunsan fiican maskax
dhexgalaan karo. Tani waxay bilaabantaa
Nolosha shaqeynta iyo kor u tagaa
Waad ku mahadsan tahay – Waxaan ka dhigay this
Wadahadal kula bartay wax…
Ciyaarta goobta waa in loo ballaarin. Waayo-aragnimada kale weli in lagu xiro…
Tags: Depression, ciyaaro
This entry was posted on Wednesday, March 18-, 2015 at 10:56 by Hans Kottke oo la soo gudbiyay hoos 2015, General, Jeeda. Waxaad raaci kartaa jawaabaha wax to this entry marayo RSS 2.0 feed. Waxaad awoodi kartaa ka tago jawaab, ama trackback ka your site u gaar ah.
Tue Jul 16 16:51:38 UTC 2019